Ukususela kumaxesha amandulo, iinwele zanikwa ukubaluleka okukhulu. Ngokomzekelo, babenqatshelwe ukusika, kuba iinwele zenza njengophawu lobunzima. Okhokho bethu bakholelwa ukuba ubude beenwele, ubuninzi babo umnikazi wabo ukhuselwe kwizifo nezifo ezahlukahlukeneyo. Ngako oko, akumangalisi ukuba iinwele zinikezelwa ngqalelo ezininzi kunye neencwadi ezahlukeneyo zokuphupha. Ukutolika kwamaphupha anxulumene neenwele kwiincwadi ezahlukeneyo zokuphupha ziyahluka, kodwa zininzi ngokufanayo.
Ngokwenene, ukutolika kwamaphupha kubhekiselele kumbala kunye neempawu ezifanelekileyo zeenwele. Umzekelo, isimo esihle seenwele ephupheni sinokuthetha ngamandla, ubuncwane kunye nobomi obude. Ukuba iinwele zisuswe kwiimeko eziphosakeleyo, ingaba ziyehla, zingabonakali, zigugu okanye zihluthiwe, ngoko kukho ukuphakama okukhulu, ukukhathazeka okanye ukulahleka. Kubaluleke kakhulu ebhokisini lephupha ubude beenwele. Ngelo xesha, ukutolika kwento enokuyenza ngeenwele ezinde kuxhomekeke kwisini somntu.
Ukuba iinwele ezinde ziphupha ngumfazi
Inketho eqhelekileyo malunga nayo yonke iincwadi zokuphupha ezibonisa amaphupha ngeenwele ezinde yindlela ende. Nangona kunjalo, zininzi ezinye iindlela ezinokwenzeka.
Iphupha apho umfazi omhle ephupha ngeenwele ezinde, unokuthetha ngokuphila okuntle, inhlalakahle. Ukuba ekugqithweni kwephupha kugxininiswe kwi-hairstyle enhle, kuthetha ukuba ikusasa liya kuninika ithuba lokukrazula into engamnandi.
Ukuba udibanisa iinwele zakho ephupheni, oko kungathetha ukuba unqatshelwe iimvakalelo malunga nobomi bakho kwaye ujwayele ukwenza izenzo zokukhawuleza, ozozisola ngokuqinisekileyo.
Iphupha apho owesifazane ephethe iinwele ezilukhuni kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba unomdla ongaqhelekanga kwaye kulungele ukuzama ukumthoba.
Ukuba ephupheni ubona iindwangu zemibala eyahlukileyo entloko yakho, oko oku kuthetha ukuba ebomini kufuneka wenze ukhetho olubalulekileyo. Ukuba kuvela ukuba kulungile, ngoko kwixesha elizayo kuphela izinto ezilungileyo ziya kuba ebomini bakho.
Ephupheni, wenza i-curl kwii-curls ezide-oku kuthetha ukulahlekelwa ngumdla kubomi obatshatileyo. Ukuba iinwele zakho ziphuma - ingozi enkulu yeengxaki zezemali kunye nokulahleka. Iphupha apho unqumle khona unwele olude komnye umntu, uthetha ngomvuzo wakho okhawulezileyo kunye nelahleko zakho ezingabalulekanga zemali.
Ukuba iinwele ezinde ziphupha indoda
Ukulala, apho umntu enxiba iinwele ezinde, uthetha ngomngcipheko wokukhohlisa ubulili obufanelekileyo. Ukuba umntu uphupha ukuba uthintela iinwele zabesetyhini, ufuzisela uthando olulandelayo kunye nomfazi omhle kwaye uthembekileyo, okade ephuphayo.
Ukuba ngendoda indoda ibona umfazi ngee-curls ezinde, oko kungathetha ukuba unomthandi. Iphupha apho umntu ephupha khona ukuba enekhanda elide eliqhelekileyo, kuthetha ukuba uya kuphumelela kwimicimbi yothando.
Kutheni uphupha iingubo ezimhlophe?
Kutheni uphupha ukukopela umntu?
Akunakwenzeka ukuba ungene kwixinzelelo
Inkukhu kwi-honey sauce
Ungayithanda njani indoda? Iimpawu zengqondo ezi-5 eziza kuphuhliswa
Ukulungiswa komntwana kwintlalo entsha yentlalo
Iipilisi ze-silicone zokutya
Imiba kaFebruwari 23 osebenza nabo kunye nabalingani bezoshishino - Abafutshane bayancoma abayeni beqela elisebenzayo kwi-Defender ye-Fatherland Day